विवाह पछिको दिपिकाको फिल्मी करियर
गफगाफ - चलचित्र निर्देशक दिवाकर भट्टराइ र अभिनेत्री दीपिका प्रसाईले केहि समय अघिमात्र करिव ४ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध पछि इन्गेजमेन्ट गरे । इन्गेजमेन्ट अघि नै उनिहरुले कोर्ट म्यारिज भने गरिसकेका थिए । चलचित्र नगरीमा आउन अघि नै यो जोडीले एक अर्कालाई चिनिसकेका थिए । इन्गेजमेन्ट पश्चात यो जोडी थाइल्याण्डमा हनिमुन मनाएर भर्खर मात्र नेपाल फर्किएको छ । चलचित्र नगरीमा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जो विवाह पश्चात चलचित्र नगरीबाटै बिलाएका छन् । धेरैले दिपिकालाई पनि सोहि नजरबाट हेरे । दिपिकाले पनि विवाह गरिन् कतै अब दिपिका पनि चलचित्र नगरीबाट हराउने पो हुन की ?
विवाह गर्नासाथ दिपिकालाई झट्का पनि नलागेको हैन । सुरुवातमा पुनम इन्टरटेन्मेन्टको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रमा दिपिकाले काम गर्ने पक्का भएको थियो तर उनले निर्देशक दिवाकर भट्टराइ सँग टिकाटालो गरेको खवर बाहिरिना साथ उनको हातमा आएको चलचित्र खोसियो र सो चलचित्रमा अब नायिका सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले काम गर्ने पक्का भइसकेको छ । उनले उक्त चलचित्रका निम्ति कागजी सम्झौता नै गरिसकेकी छिन् ।
दिपिका अभिनित चलचित्र छक्का पञ्जा ३ यतिबेला पनि चलिरहेको छ । चलचित्रले नेपालमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत विभिन्न रेकर्ड राखिरहेको छ । चलचित्र छक्का पञ्जा ३ युनिट सँग पनि दिपिकाको सम्वन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेन । अब दिपिकाले के गर्छिन त ? धेरैको चासोको विषय बनिरहेको छ । दिवाकर र दीपिका पहिले देखि नै सँगै बस्तै आएका भए पनि विवाह भने आउदो वर्षमा गर्ने उनिहरुको योजना छ । सन्तानका विषयमा पनि अहिले केहि सोचि नसकेको नयिका दिपिका बताउछिन् । उनि ठट्टा गर्दै भन्छिन् “भर्खर त कसैकी श्रीमती बनेको छु पहिले यसको अनुभव राम्रो सँग लिउ, आमा बन्नका लागी त अझै धेरै समय छ नि ।”
दिवाकरले निर्देशन गरेको चलचित्र क्याप्टेन प्रदर्शनमा आउन बाकी नै छ । त्यस पछि दिवाकारको निर्देशनमा बन्ने अर्को चलचित्रमा भने दिपिका नै नायिकाका रुपमा हुने बताइको छ । “अर्को प्रोजेक्टका निम्ति काम सुरु भइसकेको छ । अब दिपिकाले लिखित सम्झौता गर्न मात्र बाकी छ ।” निर्देशक भट्टराइको भनाई छ ।